Izihloko eziyi-8 ezikhulunywa kakhulu ngomlando wamanoveli okwamanje Izincwadi Zamanje
Ngiphuthelwe inombolo yokuqala Ikholomu yomlilo, of Ken follet, esanda kushicilelwa futhi esivele isiphezulu ohlwini. Kubukeka sengathi izigidi zabalandeli bomlobi waseWales bebezibheke ngabomvu. Kepha kunezinye izihloko ezisezikhundleni zokuqala zababeke amazwana kakhulu manje inoveli yomlando. Ngizigcinile lezi Izincwadi ze-8, kusuka kokusha kuya kokudala.
1 Amakhosi aseNyakatho - uBernard Cornwell
2 Isigodlo Senyanga - Weina Dai Randel
3 Ukumamatheka Kwempisi - uTim Leach
4 IKnight of the White Boar - UJosé Javier Esparza
5 ISpartan - uJavier Negrete
6 Isaga sabaphila isikhathi eside - u-Eva García Sáenz de Urturi
7 UCaptain of Sea and War - UPatrick O'Brian
8 Ngizosindisa impilo yakho - uJoaquín Leguina noRubén Buren
Amakhosi asenyakatho - UBernard Cornwell
Incwadi yesithathu kusaga ye AmaSaxon, amaViking kanye namaNorman de UBernard Cornwell, umbhali odumile waseNgilandi, umdali walesi sibhamu URichard Sharpe nomphathi wohlobo. Setha kufayela le- ukuhlaselwa kwe-viking weGreat Britain ngesikhathi sokubusa U-Alfred Omkhulu, lesi sihloko sochungechunge sashicilelwa ngo-2008.
I-protagonist ngu Uhtred Ragnarson, kwesinye isikhathi kwaziwa njengo-Uhtred Uhtredson. Wazalelwa eNorthumbria, ubanjwa futhi wamukelwa ngabakwaDanes. Bayamfundisa njengomunye wabo. Kule noveli Uhtred buyela emuva enyakatho ngemuva kokusiza u-Alfred ukuthi aguqule iWessex ibe ngumbuso ozimele weSaxon. Ufuna ukuthola udadewabo wokutholwa, kodwa lapho usendleleni uzogijimela ezweni elisenkingeni nasempini.
Ngokuqondile le saga nayo ine- ukulungiswa kwamuva njengochungechunge lwethelevishini kusukela kusihloko sakho sokuqala, Umbuso wokugcina.
inyanga, iSigodlo S - UWeina Dai Randel
Ingabe i- inoveli yokuqala yalombhali waseChina. Sise- ngonyaka we-631 ne-protagonist, Mei, ohlala nomndeni wakhe buthule, kepha ngenxa yezimo, uzoba yingxenye izindlovukazi zezancinza esigodlweni sobukhosi. Ngeke ube nokhetho ngaphandle kokuzama thola ukunaka kombusi. Futhi izokwenza ukuphela kwendlela eyazi ngayo: ngezimfanelo eziyenzile oxoshiwe phakathi kwazo zonke ezinye izancinza.
Ukumamatheka kwempisi - UTim Leach
Kuseseku-oda kwangaphambilini ngoba ayishicilelwanga kuze kube ngu-Okthoba 26. ULeach uthweswe iziqu e-University of Warwick, lapho ahlala khona futhi efundisa ukubhala ngobuciko.
Enye indaba nge vikings nge protagonist, imbongi UKirián ongenamhlaba. Yena nomngani wakhe uGunnar, iqhawe lasendulo lamaViking elizinze e-Iceland, baphuma baya bulala isipoki eyayihlukumeza ipulazi elingumakhelwane. Kepha bekuyinkohliso futhi babulala umuntu. Lobo bugebengu, ku- Ngekhulu le-XNUMX i-Iceland , ngaphandle kwamakhosi noma izinduna, bekungahlanzwa kuphela ngesiliva noma ngegazi. Noma ubhekene ne- ophikisana nokumamatheka kwempisi.
I-Knight of the White Boar - UJosé Javier Esparza
Intatheli nomlobi, umbhali wamanoveli angaphezulu kuka-20 omlando, ushicilele le noveli ku 2012. Uxoxa indaba ka Indawo, okuyiminyaka yokugcina ka Ikhulu lesi-XNUMX wesikhathi sethu, uwela izintaba zaseCantabrian nomndeni wakhe befuna izwe elingcono. Kodwa bayazi ukuthi bangazithola bephangwe amaSulumane noma bagcine beyizigqila emakethe enkulu yeCórdoba. Ama-avatar akho azoba abangaphambi kweReconquista.
I-spartan - UJavier Negrete
Lokhu kuthweswa iziqu ku-Classical Philology kuhlwanyela ikakhulukazi izinhlobo ze inganekwane nesayensi. Kepha ubuye wabhala inoveli inkanuko ngempumelelo.
Futhi ekuthengisweni kwangaphambi kokuphela kwale nyanga, ngale noveli siya onyakeni 480 BC C. Inkosi Leonidas, ngaphambi kokuba afe empini yaseThermopylae, hambisa isikhulu incwadi Perseus futhi uyala ukuba abuyele eSparta ayinikeze umkakhe, uGorgo. Kepha empeleni uPerseus uyindodana yeNkosi uDamarato, owaba yisisulu setulo lasesigodlweni, ulahlekelwe yilungelo lokuhlala esihlalweni sobukhosi futhi kufanele sifunde ukusinda njengeqhawe elilula.
Isaga sabadala - U-Eva García Sáenz de Urturi
En 2012 le noveli yashicilelwa eyayingenye ye ukuthengisa okuhle nezenzakalo ezibucayi. Umlando nobudlelwano be waphila isikhathi eside Iago del Castillo, neminyaka engu-10.300 XNUMX, futhi Adriana, prehistorian osemncane futhi ozimisele obuyela eSantander yangakubo, oqashwe umnyuziyamu lapho esebenza khona, usadumile.
Ukaputeni wolwandle nempi - UPatrick O'Brian
Okwakudala okwakudala. Isihloko sokuqala ochungechungeni yamanoveli angama-21 abhalwe umphathi waseBrithani wohlobo lwe-adventure yempi yasolwandle. Kudlala ukaputeni UJack Aubrey kanye nemvelo kanye nenhloli UStephen Maturin, basenjalo namanje ebalulekile kulabo abazigqajayo ngokuba ngabathandi benoveli yomlando.
Kule noveli yokuqala esikuyo Mahon, ngo-Ephreli 1800, ngokugcwele izimpi ze-napoleonic phakathi kweGreat Britain neFrance. Lapho, ngesikhathi sekhonsathi, uDkt Stephen Maturin uhlangana no-Lieutenant Jack Aubrey ngaleso sikhathi. Yabalingiswa abahlukile njengoba bephikisana, ubungani abazobakha buzoba baphakade.
Ngizosindisa impilo yakho - UJoaquín Leguina noRubén Buren
NgoJulayi 5 le noveli iwine i- Umklomelo Ka-Alfonso X El Sabio Womlando Wenoveli kumagazini wayo weshumi nesithupha. Ibhalwe ngokulandelana nguLeguina no Buren, ilandisa ngempilo ka UMelchor Rodriguez, i-anarchist eyaziwa nangokuthi «Ingelosi ebomvu', Esisindise izimpilo eziningi ngesikhathi se- Impi yezikhali nokuthi ungukhokho kaBuren.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Izihloko eziyi-8 ezikhulunywa kakhulu ngomlando wamanoveli njengamanje